Maxamed Ibrahin [Indhabuur], Yuu Maraykanka ugu Xidhan Yahay? – Rasaasa News
Maxamed Ibrahin [Indhabuur], Yuu Maraykanka ugu Xidhan Yahay?
Mar 15, 2010 Indha-buur, Jwxo-shiil
Taliyihii Booliska kaalinka 5aad ee shaqada booliska uga dambeeyey Cabdiqdir Xasan Hirmoge [Cadaani], ayaa waxaa uu ku jiraa xabsi ku yaal dalka Maraykanka muddo, hadaba waa su,aale Maxamed Ibrahin Indha-buur yaa dacweeyey, muxuuse yahay dambiga uu galay?
Waxaa wafati ku yimaada dalalka reer galbeedka masuuliyiinta ay dadweynaha Somalida Ogadeeniya aadka uga neceb yihiin gudo iyo dibadba. Waxaa kale oo dalalka reer galbeedka ku nool dad aad u badan oo masuuliyiin ka soo noqday kaalinka 5aad, walina u shaqeeya, wax dhibaato ah oo ay la kulmaana ma jirto.
Maxamed Ibrahin Indha-buur, kolkii laga qaaday shaqada booliska waxaa uu noqday nin ganacsade ah. Waxaana uu jeclaystay in uu si xor ah isagga noolaado dhulkiisa, nasiib daro arintaas waxaa u diiday qaar ka mid ah masuuliyiinta xiligan xaadirka ah. Arinkani kali kuma ahayn Indha-buur ee masuuliyiintani waxay jeclaysteen in aan ruuxna caymanin dadka gabalka u dhashay nooca kasta iyo shaqa kasta oo uu haystay.
Maxamed Ibrahin Indha-buur, waxaa uu ka baxsaday xadhig lala damacsanaa, waxaana uu u baxsaday dalka Jabuuti oo uu uga sii gudbay dalka Kenya, halkaas oo uu ka helay fursad viso uu ku tago dalka Maraykanka.
Maxamed Ibrahin Indha-buur, kolkii uu magangalyo ka codsaday Maraykanka, waxaa kolkiiba ka hoos dhashay kooxda Jwxo-shiil, oo ku eedeeyey Maxamed Ibrahin dhibaatooyinka xiligaas ka taagnaa dhulka Somalida Ogadeeniya ee uu isaguba ka soo cararay. Waxayna kooxda Jwxo-shiil abaabuleen, dad ku ooga Indha-buur dambiyo dhacay ka dib xiligii uu ahaa taliyaha Booliska, kuwaas oo uusan isagu masuuliyadooda lahayn ama uusan waxba kala socon. Waana Arintaas arinka uu tan iyo maanta u xidhan yahay, mana jiraan wax cadayn ah oo loohayo dambiga uu galay ee waxaa uun lagu haystaa Abtigay buu xidhay oo aan cadayn loo lahayn.
Marna ma mudna in la difaaco ruux si xun u adeegsaday awood maamul, laakiin waxaa fiican in ruuxa lagu ciqaabo waxa uu gaystay oo aan isaga laftiisa dulmi lagu samaynin.
Waxaase muuqata in Indha-buur, dacwayntiisu ay ahayd mid ku salaysan ujeedo gaar ah, oo ay ka dambeeyaan kooxda Jwxo-shiil, mana aha mid loogu hiilinayo dadweynaha Somalida Ogadeeniya ee dhibaataysan.
Maxamed Indha-buur, waxaa uu ku xidhan yahay dal ka mid ah dalalka xuquuqda dadka Ilaaliya, walina waxaa uusan helin dad sheega xaq darada uu Indha-buur ku xidhan yahay. Itobiya oo ah dalalka lagu sheego in ay ku tuntaan xuquuqda dadka ayaa looga dacwoodaa in ay siidaayaan dadka u xidhan, loona sameeyaa ololeyaal sidii ay u sii dayn lahayd.
Waxaa nasiib daro weyn ah in Indha-buur, oo ka soo carary dhibaato, lagu dhibaateeyo gudaha dal ka mid ah dalalka xuquuqda dadka ilaaliya iyada oo ayna jirin dambi cad oo lagu hayo.
“Tolomoge Kaligay Baa Kaga Jiray ONLF” Sidaasi Waxaa yidhi Cabdi-Nuur Maxamed Soyaan
Mataqaan Cibaado Maxamed Tarabi?